Chrome OS 73 inosvika uye ikozvino inobvumira kugovana faira neLinux | Linux Vakapindwa muropa
Google yakaburitsa Chrome OS 73. Iyo yazvino uye nyowani vhezheni yedesktop inoshanda sisitimu kubva kune inozivikanwa kambani yekutsvaga injini iri kuoneka paChannelbook, chimwe chinhu chiri kuita zvishoma nezvishoma. Iyo vhezheni nyowani inoenderera nesimba reChannel OS 72 mukuyedza kwayo kurerutsa marongero uye inowedzera sisitimu nyowani yekufananidza masevhisi eGoogle. Asi chinonyanya kufadza rutsigiro rwakaverengerwa uye izvo zvinoita kuti Chrome OS ikunde manhamba mazhinji.
Tiri kutaura nezvazvo rutsigiro rwefaira uye dhairekodhi kugovana neLinux application, chimwe chinhu chiri mu chinyorwa chinodzidzisa Ivo vanotaura kuti inowanikwa kune vanogadzira. Izvi zvinoreva, semuenzaniso, kuti isu tinogona kuvhura pikicha kana vhidhiyo mune yeLinux mupepeti. Uye ndeyekuti Chrome OS yakaitwa inoenderana neLinux kunyorera mune yapfuura vhezheni, nekutenda kune emulator iyo inomhanya kwazvo LXDE mumuchina chaiwo. Asi, zvine musoro, ichi hachisi icho chete chitsva chinouya kubva muruoko rwe Chrome OS 73. Pano tinokuratidza dzakanyanya kunaka.
Zvakakwirisa zve Chrome OS 73
Tsigiro yekugovana mafaera uye maforodha neLinux apps.
Yakagadziridzwa yemuno kusangana neGoogle Drive muFiles application.
Zvirinani ndangariro manejimendi.
Native multimedia kutonga kwekutamba kwevhidhiyo.
Yakananga kutsigirwa kwekuteerera muCrOS.
Wakawedzera rutsigiro rwekuzivisa yakawedzera telemetry pane Chromebook zvishandiso.
Nyevero yekuzivisa vashandisi nezve kubviswa kwevasara veChrome Vanotarisirwa Vashandisi.
Demo modhi: chinja marongero emitauro uye rejista uye gadzira isinei nebasa
Pamidziyo yakachengetedzwa, muganho wepamusoro wemaprinta ari kure ari makumi maviri achawedzerwa kubvumira zviuru zvemazana zvemaprinta echikwata chega chega muGoogle admin koni.
Sezvatakambotaura, kuburitsa kuri kuita zvishoma nezvishoma, saka kana usati wawana pane yako Chromebook, iva nemoyo murefu, iri kuuya nekukurumidza. Kuti watogamuchira kare? Uri kuita sei ne Chrome OS 73?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS 73 inosvika uye ikozvino inobvumira kugovana faira neLinux